Sidee "caqli" u yahay mishiin wax iibiya oo caqli badan?
Waqtiga: 2019-09-27 Hits:
Sirdoonka mashiinnada iibinta ayaa aad uga badan shaashadda taabashada.
Hadda mashiinka wax iibinta "sirdoonka" inta badan waxay ka kooban tahay saddex dhinac,
Dhinac, xakamaynta caqliga leh ee alaabada, taas oo macnaheedu yahay macaamil kasta si toos ah loogu isticmaalo xog ahaan wixii ku saabsan iibsashada iyo falanqaynta iibka ee xiga;
Dhinaca kale, mashiinka wax iibintu wuxuu si buuxda ugu xiran yahay korjoogteyn iyo ilaalin, taas micnaheedu waa in farsamo yari iyo macluumaad yaraanta ay ku jiraan nidaamka korjoogteynta. Digniin, si weyn kor loogu qaado hawlgalka meheradda iibinta mashiinnada iibinta;
Saddexaad, shaashadda casriga ahi runtii waa dhaqan ka mid ah fikradda caanka ah ee "kombiyuutarka lagu qeexay qalabka". Bandhigyada xayeysiinta iyo kordhinta kale ayaa horeyba looga hirgalin karaa shaashadda mashiinnada iibinta.
Guud ahaan marka la hadlayo, mashiinnada iibintu waxay si tartiib tartiib ah u soo bandhigeen faa'iidooyinkooda gaarka ah iyagoo ku tiirsan horumarka "mobilada" iyo "waxgaradka".
Weli waxaa jira qolal badan oo loogu talagalay suuqyada maxalliga ah, laakiin mashiinnada iibintu waxay leeyihiin faa'iido darrooyin u gaar ah maxaa yeelay ma sii horumarin karaan muddo dheer.
1. Alaabada ay iibiyaan makiinadaha iibintu waxay ka tirsan yihiin qaybta dhaqsaha u dhaqdhaqaaqa. Badanaa cabitaanada iyo cunnooyinka fudud ee la iibiyay waa badeecado faa iido yar, faa iidaduna waa yar tahay.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo marayo iibinta xayeysiinta qaybta saddexaad, iyo xitaa iskaashiga suurta galka ah ee ka shaqeeya shirkadaha mobilada, faa iidada ayaa la wanaajin karaa, laakiin ujeedka ayaa ah in mashiinada iibintu ay daboolaan dad aad u tiro badan.
2. Xaddididda mugga mashiinka iibinta lafteeda. Haddii ay aad u weynaato, waxay kordhineysaa qiimaha, waxayna dhalisaa faa'iido aan ku filneyn. Xaqiiqdii, dhibaatadani wali waxay hoosta ka xariiqdaa khasaarihii ugu horreeyay; si kastaba ha noqotee, maadaama soosaarayaasha mashiinnada iibintu ay leeyihiin fikirka ah inay ku daraan mashiinnada wax iibinta iyo sanduuqyada boosta, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in alaabo fara badan oo mustaqbalka ah ay sababi karaan in mashiinnada iibintu ay culeys ka saaraan.
3. Mashiinada xaraashka ah badanaa waxay ku urursan yihiin jaamacadaha iyo shirkadaha wax soosaarka xoogga saarta.
Haddii ay jiraan dhagaystayaal xaddidan, waxaa jiri doona fursado aad u yar oo lagula shaqeyn karo xayeysiistayaasha iyo xitaa shirkadaha ka shaqeeya. Hadda shirkadaha mashiinnada iibiya waxay wada-xaajood la galeen dhulka hoostiisa waxayna bilaabeen inay terminal ku dhigaan dhulka hoostiisa. Tani waa fursad wanaagsan oo lagu ballaariyo saameynta.
Si kastaba ha ahaatee,
La'aanta gogosha adag, wax sahlan ma aha, oo qof walbaa fahmayo.
Haddii aad rabto inaad ka hesho koob oo maraq ah, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u diyaar garoobtid.
HORESidee loo ilaaliyaa mashiinka wax iibinta?
NEXT Mashiinnada iibinta noocee ah ayaa caan ka ah?